Paleocene: mara ihe niile gbasara oge a | Network Meteorology
El Ogechi e kewara ya n'ọtụtụ oge. Otu n’ime ha bụ Paleocene. Ọ bụ otu n'ime ala nke oge ochie nke sitere na ihe dị ka nde 66 afọ gara aga ruo ihe dị ka nde 56 afọ gara aga. Oge a ruru ihe dị ka nde afọ iri ma ọ dị na mgbe usoro mmebi iwu nke dinosaurs. N’oge a mbara ụwa dị n’otu n’ime ọnọdụ kachasị njọ ọ nwetụrụla kemgbe ụwa. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọ kwụsiri ike ruo mgbe ụwa ghọrọ ebe zuru oke ibi na ebe ọtụtụ osisi na anụmanụ nwere ike ibi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Paleocene.
2 Gelea Paleocene na Climatology
2.1 Onye ozo nke na-ebili okpomọkụ
3 Osisi Paleocene na fauna
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ihe omumu banyere ala a dika ihe dika nde iri. N’oge a, enwere kesasị ihe banyere ala. Nke a pụtara na ụwa anyị nọ na-arụsi ọrụ ike site na mbara ala. N'oge a nnukwu kọntinent a na-akpọ Pangea ka nọ na nkewa zuru oke. Igwe tectonic na mmegharị ha na-aba ụba na kọntinent dị ebe ahụ na-aga n'ihu ọnọdụ ha nwere taa.
Oge a na-enwu gbaa maka ọtụtụ ihe dị iche iche dị na mbara igwe. N'oge Paleocene ọtụtụ ìgwè anụmanụ nwere ike ịlanarị mkpochapụ nke a nke kpatara dinosaurs. N'oge gara aga, ha nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke fọdụrụ mgbe ihe omume ahụ pụrụ iche gasịrị wee nwee ike ịbawanye ụba, na-ebi ọtụtụ ala.
Omume nke tectonic na-ebute ọrụ dị elu nke ala. N’oge a ọ gosipụtara nguzobe nke Laramide orogeny. Usoro a dị oke mkpa site na echiche nke geology ebe ọ bụ na o nyere nsonaazụ ozugbo na nhazi ọtụtụ ugwu ugwu dị taa na North America na Mexico. Ugwu ndị a bụ Ugwu Rocky na Sierra Madre Oriental.
Gondwana bụ otu n’ime nnukwu mba ndị ọzọ na Pangea. Nnukwu ala a gara n’ihu na-ekewa na ha bụrịị akụkụ nke a nnukwu ala Africa, South America, Australia na Antarctica. Akụkụ ala ndị a buru ibu 4 gbasasịrị wee malite ịkwaga n'ihi mmetụta nke ịkpapo kọntinent n'akụkụ dị iche iche. Ọ bụ Antarctica nke gara n'akụkụ ndịda nke mbara ala ebe ọ ga-ejedebe na ice kpamkpam. Anyị ga-aghọta na, na-enweghị ọnọdụ kọntinent a ugbu a, ọ gaghị ekpuchi ice ma bụrụ mpaghara dị ka ndị ọzọ.
Gelea Paleocene na Climatology
Site na kọntinent Africa, ọ gafere n'ebe ugwu ma mesịa daba na Eurasia. Australia, n'akụkụ nke ya, kwagara ntakịrị n'ebe ugwu ọ bụ ezie na ọ na-anọkarị na mpaghara ndịda nke mbara ala ahụ. Anyị amaworị na ngagharị nke kọntinent ndị ahụ dabere na mbadamba tectonic na convection ugbu a nke uwe elu ụwa.
Iberibe mpempe akwụkwọ nke taa na-anọchi anya South America kwagara n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ ruo mgbe ọ dị nso na North America. Ka ha na-adịghị n'otu, ha nwere iberibe mmiri nke a maara dịka oke osimiri kọntinent. Akwa mmiri dị n'etiti ngwụcha ebe ọwụwa anyanwụ Eshia na ọdịda anyanwụ nke Ebe Ugwu America nke jikọtara ha ruo ọtụtụ puku afọ. Ka ọ dị ugbu a, Osimiri Pasifik jikwa ohere ahụ.
Banyere ihu igwe Paleocene, oge ndị mbụ mbara igwe jụrụ oyi ma kpọọ nkụ. Nke a bụ n'ihi ọnọdụ ndị mgbatị ochie hapụrụ. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ karị.
Onye ozo nke na-ebili okpomọkụ
N'oge a ihe omume mere nke mere ka ọnọdụ okpomọkụ mụbaa site na obere pasent. Obere ihe omume a bịara buru ihe amara dika Paleocene thermal kacha.
Ọ bụ ihe omume ihu igwe nke ụwa ji elu rịa elu site na nkezi nke ogo 6. Inyocha ihe ndekọ ndị dị na mbara igwe n'oge a, enwere ike ịhụ etu ọnọdụ okpomọkụ si gbasie ike na osisi. A maara nke a ebe ọ bụ na achọtara ihe ndị ọzọ na-adị na mmiri nke ebe okpomọkụ na Oke Osimiri Arctic.
Ihe omuma a nke otutu okpomoku nwekwara ihe ojoo na aru mmiri, na emetuta otutu ihe di ndu. Ngwurugwu ndi a metutara nke oma site na ihe omuma a na ihe omuma doro anya bu mmepe nke umu anumanu. A na-anwa ịkọwa ihe dị iche iche na-akpata mmụba na ọnọdụ okpomọkụ a, ọrụ ọkụ ọkụ siri ike so na ndị kachasị emetụta. Otu n’ime ihe ndi n’aru na mberede bu nke comet n’elu uwa ma obu iwepu oke nke methane gas n’ime ikuku. Dị ka anyị si mara, gas methane bụ ike griinụ gas na okpomoku na-ekpo ọkụ.
Na ngwụcha nke Paleocene ihu igwe dịtụ ọkụ ma karịa mmiri mmiri.
Osisi Paleocene na fauna
Mkpochapu otutu mmadu mere ka otutu umu noo ndu ma nwee obi uto, di iche iche, buru kwa ndi ohuru di iche iche di na mbara ala. Ka anyi nyocha ohia. N'oge a ọtụtụ osisi malitere na ka na-adịgide taa dị ka nkwu, conifers na cacti bu.
Otu ihu igwe dịtụ ọkụ ma na-ekpo ọkụ karị, ọ na-akwado nnukwu ala nke ahịhịa na ahịhịa ndụ jupụtara, na-esite n'ihe anyị maara taa dịka oke ọhịa na oke ọhịa.
Banyere ụmụ anụmanụ, ụmụ anụmanụ ndị lanarịrị nwere ohere ịbawanye ma gbasaa n'ụwa niile. Animalsmụ anụmanụ nwere ogo kachasị elu bụ nnụnụ, na-akpụ akpụ na azụ. Ihe mmepe a bu n'eziokwu na ka ndi dinosaurs na-efu, ndi na-eri otutu umu anumanu ghapuru ma mpi maka ihe ndi ozo.
Ọnọdụ anụ ndị na-akpụ akpụ na-amasị ọnọdụ ihu igwe nke nwere n'oge a ma nwee ike ịgbatị ọtụtụ ndị bi na ya. Banyere anụmanụ, ọ nwere ike bụrụ otu kachasị nwee mmeri n'ime ụmụ anụmanụ Paleocene niile.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe banyere Paleocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Paleocene